बिहिवार, असार ३, २०७८ ०८:१५:०४ युनिकोड
नेपालमा थपिँदै संक्रमित
चैतको पहिलो साता देखि कोरोना संक्रमण दर बढ्न थालेको छ । केही समय अघि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको संख्या दुई जना मात्र थियो । ती पनि निको भएर जाने तरखरमा थिए ।
अब अस्पतालमा बिरामी सकिए भनेर अस्पताल प्रशासनले सरसफाइको तयारी थाल्यो । तर यो हप्ता सुरु हुना साथ अर्को दुई जना बिरामी थपिए । फेरि अर्को दुई जना गर्दा गर्दै अहिले नौ जना कोरोनाका बिरामी आइ पुगे ।
अस्पतालका निर्देशक डा. सागर कुमार राज भण्डारीले भन्नु भयो, “अस्पताल पूरै सफा गरेर अन्य बिरामीका लागि खुला गर्नु पर्यो भनेर ठिक्क परेका थियौँ, कोभिडकै बिरामीको चाप फेरि बढ्न थाल्यो ।” पछिल्लो समयमा भर्ना भएका मध्ये बागलुङबाट काठमाडौँ आएका बिरामीमा कोरोना भेटिए पछि संक्रमणको अर्को लहर आउन लागेको आशङ्का भएको डा। राजभण्डारीले बताउनु भयो ।
विदेशबाट आएका व्यक्तिमा संक्रमण देखिनु स्वाभाविक थियो । तर मुुलुक भित्रैबाट आएका व्यक्तिमा पनि भेटिनुले संक्रमणको जोखिम बढेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार खोप लगाउने, नलगाउने, विदेशबाट आउने सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गर्न पछिल्लो समय लापर्वाही गरेकाले नेपालमा फेरि संक्रमण दोहोरिने सङ्केत देखिएको हो । उहाँले थप्नु भयो, “भारतका १८ वटा राज्यमा ‘डबल म्युटेसन’ कोरोना देखिइ सकेको छ, युरोपेली मुलुकमा तेस्रो लहर सुरु भइ सकेको छ, यस्तो अवस्थामा सीमा नाका र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै कडाइ गर्नु जरुरी छ ।”
युरोपेली मुलुकमा देखिएको तेस्रो लहर विगतको भन्दा जटिल देखिएको चिकित्सकको भनाइ छ । यसले ती देशमा मृत्युदर पनि बढाइ रहेको छ । ती मुलुकबाट नेपाल सहित दक्षिण एसियाली मुलुकमा आवतजावत गर्ने यात्रुले तेस्रो लहरको कडा संक्रमण ओसारि रहेको अनुमान उहाँले गर्नु भयो ।
पछिल्लो समय खुला रूपमा सभा, सम्मेलन गर्ने, विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक रूपमा भेला हुने क्रम बढेर पनि समस्या आएको कतिपयका भनाइ छ । त्यसले पनि बाहिरबाट कुनै घरमा छिरेको कोभिड संक्रमणलाई फैलाउन मद्दत गरि रहेको डा. राजभण्डारीले बताउनु भयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अद्यावधिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकमा घट्दै गएको कोरोना संक्रमण एक महिना यता उकालो लाग्न थालेको छ । फागुन मध्यताका नेपालमा सक्रिय केस ०.३ प्रतिशतमा झरेको थियो भने भारतमा १।४ प्रतिशत, भुटानमा ०.५, बङ्गलादेशमा ७.७, अफगानिस्तानमा ७.१, माल्दिभ्समा १२.७, पाकिस्तानमा ३०.८ र श्रीलङ्कामा ४.७ प्रतिशत सक्रिय केस थिए ।
चैत लग्दासम्म नेपालका सक्रिय ‘केस’ को अवस्था उस्तै रहे पनि भुटान, भारत, श्रीलङ्का र पाकिस्तान लगायतका देशमा सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या घटेको थियो । निको हुने दर बढेर ९९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । कोरोना निको हुन दर बढ्दै गएको थियो तर चैतको पहिलो साता देखि भने सार्क मुलुकको संक्रमण दर बढ्न थालेको छ ।
चैत १० गते मन्त्रालयले अद्यावधिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालका संक्रमितको दर बढेर ०.४ प्रतिशत पुगेको छ । भारतको तीन प्रतिशत, बङ्गलादेशको सात, पाकिस्तानको ४.७, श्रीलङ्काको ३.२, माल्दिभ्सको १०.८ र अफगानिस्ताको ७.१ प्रतिशत सक्रिय केस रहेको थियो ।
भुटानमा मात्र हाल सक्रिय केस शून्यको अवस्थामा छ । त्यहाँ एक साता अघि ०.१ प्रतिशत सक्रिय केस थियो । मृत्युदरको अवस्था भने ०.१ कै अवस्थामा कायम छ । जुन नेपालको हकमा १.१ प्रतिशत हाराहारी रहेको छ ।
केही दिन अघिसम्म दैनिक ५० जना जतिमा देखिने कोरोना संक्रमण अहिले डेढ सय जनाको हाराहारीमा देखिन थालेको छ । बुधबार १८७ जनामा देखिएको संक्रमण बिहीबार १ सय ४५ जनामा देखिएको थियो । शुक्रबार थप १ सय ५६ जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला मध्ये काठमाडौँमा ५५, भक्तपुरमा दुई र ललितपुरमा नौ जना गरी उपत्यकामा ६६ जना संक्रमित थपिएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा देश भर चार हजार ४ सय १६ जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण भएको छ ।
शुक्रबार नै थप चार जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या तीन हजार २४ पुगेको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिवार, चैत्र १४, २०७७, ०८:४६:००